EX - ABSDF: June 2014
Saw Kalyar .
နယ်သာလန် ဆီမီး တက် မတက် အဆုံးအဖြတ်ပေးမည့်ပွဲ
မိုးကြိုးပစ်၍ ဓါတ်ကြိုးပြတ်ကျစဉ် ဆိုင်အတွင်းမှ ထွက်လာသူအပေါ်သို့ ပြုတ်ကျသဖြင့် သေဆုံး
ထိုင်းအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီ ဖမ်းဆီးထားသည့် လက်နက်ခဲယမ်းတွေကို ထုတ်ပြ
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် အဆောက်အအုံနှစ်ခု ပြိုကျ၍ လူ ၁၆ ဦး သေဆုံး
ဗန္ဓုလတံတားအဆင်းကွေ့၌ ယာဉ်တိမ်းမှောက်ခဲ့သဖြင့် ခရီးသည်(၈)ဦးဒဏ်ရာရ
ဆန်ခိုးမမိ ဖွဲခိုးမိနှင့် သန်း ၆၀အတွက် ပြက်လုံးဟောင်းများ အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၆ နှစ်အတွင်း လမ်းပေါ်ကလေးများအတွက် ညပိုင်းစောင့်ရှောက်ရေးဂေဟာ ဖွင့်မည်
အသေးစားနှင့် အလတ်စား လုပ်ငန်းများ ချေးငွေ အာမခံချက်ဖြင့် ငွေချေးနိုင်ရန် စီစဉ်
အုတ်ဖုတ်လုပ်ငန်း အတွက် မြေတူး ဖော်ရာမှ ရှေးဟောင်း ပစ္စည်းများ တွေ့ရှိ
June 27, 2014 at 12:30am
အခုမှ ဖတ်ရလို့ အခုမှ မှတ်ချက်ပေးလိုက်ပါတယ် အောင်ရင်ငြိမ်းရေ။ အောင်ရင်ငြိမ်းနဲ့
သိကျွမ်းပါတယ်။ သူ့အပေါ် ကာကွယ်စရာရော တိုက်ခိုက်စရာပါ မရှိပါ။ အားထုတ်မှုနဲ့ သတ္တိကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ထိရောက်သော အားထုတ်မှုဖြစ်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်သစ်သည် တပ်မတော်မှ လာခြင်းကို မေ့ထားရန် ဒေါက်တာအေးမောင်ပြော
ချစ်သူနှင့်စကားများကာ ကားရှေ့ဖြတ်ပြေး သေဆုံးမှုတွင် ယာဉ်မောင်းအတွက် သေဆုံးသူ၏ မိဘများက အမှုကျေအေးစာတင်
ဘင်္ဂလီ(၉)ဦး တရားမ၀င်သယ်ဆောင်လာသူများ အမ်းမြို့နယ်တွင် ဖမ်းဆီးရမိ
ရိုမန်ဘော့ထ်တွေရဲ့ကမ္ဘာ ရေးသူကို ညစ်ညမ်းစာပေ ရေးသားမှုဖြင့် သင်္ကန်းကျွန်းရဲစခန်း အမှုဖွင့်
သဲကုန်းလယ်သမားများ ဇူလိုင် ၂ရက်တွင် ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ဆင်နွဲကြမည်
ခရီးသည်တင်ယာဉ်မှ လမ်းဘေးရှိ ယာဉ်(၂)စီးနှင့်လူတို့အား တိုက်မိခဲ့ရာ (၁)ဦးသေ(၁)ဦးဒဏ်ရာရ
ဘင်္ဂါလီများကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သုံးသိန်းဖြင့် ရန်ကုန်သို့ ခေါ်လာသည့် အငြိမ်းစားရဲမှူးကြီး နှစ်ဦး၏ သားနှင့်သမီးကို ဖမ်းမိ
- မြင်သမျှ… ကြားသမျှ
- ပြည်နယ်ခုနစ်ခုတွင် PR စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြမည်
၀န်ကြီးချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ် အသုံးပြုရန် ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းအား ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးပေး
အငြိမ်းစားယူရမည့် အသက်ကို (၆၃)နှစ်သို့ တိုးမြှင့်မည်ဟု သတင်းများထွက်နေ
ရိုမန်းဘော့ထ်ဖတ်အပြီး နောက်ဆက်တွဲ အတွေးများ "ဒီစာအုပ် ဖတ်သွားပြီးတော့ erotica လို့တော့ မထင်တော့ဘူး။ ကာမရာဂ စိတ် ဆွမှ ဆွမပေးနိုင်ပဲကိုး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဖတ်နေတာ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လား၊ ဒါမှမဟုတ် အဆိုအမိန့်တွေ၊ အတုံးလိုက် အတစ်လိုက် စုထည့်ထားတဲ့ အဆိုအမိန့်ပေါင်းချုပ်လားလို့ သံသယ ဖြစ်သွားတယ်။ Read more »
တက္ကသိုလ်တက်ရန် မိဘများနှင့် မခွဲနိုင်၍ အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပိုးသတ်ဆေး သောက်သေဆုံး
အမျိုးသမီးကိစ္စများအား လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန သတင်းပြန်ကြားရေး စင်တာသို့တိုင်ကြားနိုင်
သုံးနှစ်ကျော် အတွင်း လူကုန်ကူးခံရသူ (၁၀၀၀) ကျော်တွင် (၂၀၀) ခန့်မှာ လုံးဝ ကယ်တင်နိုင်ခြင်း မရှိသေး
နေထီးဆောင်းဖြစ်စဉ်နောက်ဆက်တွဲ အစိုးရအဖွဲ့ အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါ်နိုင်
ရန်ကုန်-ပြည်လမ်းမပေါ်တွင် ယာဉ်ရှစ်စီးဆင့်တိုက်မှု မွန်းလွဲတစ်နာရီခွဲအထိ အမှုမဖွင့်ရသေး
"ဂျီအက်စ်အမ်ဖုန်းများ ညသန်းခေါင်တွင် လိုင်းပြတ်တောက်မှုများဖြစ်နေ"
ဒိုင်းမွန်းပလာဇာရှိ မြန်မာ့ရှေ့ဆောင်ဘဏ်နှင့် LG Showroom ဖောက်ထွင်းခံရ
“ရိုမန်ဖွတ်တို့ရဲ့ ၄၃၆ ကမ္ဘာ” Kyaw Ba Thit
၂၀၁၄ ခုနှစ်ထုတ် “ရိုမန်းဘော့ထ်တို့ရဲ့ကမ္ဘာ” အပြာစာအုပ်ကတော့ ပတ်စာခွါ၊ ဖျာလိပ်သွားပါပြီ။ စာအုပ်ရေးသူရော ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသူတွေပါ ပြည်ထဲရေးဌာနက ခြေရာခံ လိုက်နေကြပြီ...ဆိုပါတယ်။
အသက် (၁၈) နှစ်အောက် လူငယ်လူရွယ်တွေကို လမ်းမှားရောက်စေနိုင်တာရယ်၊ (၁၈) နှစ်အထက် လူကြီးတွေအတွက် ဒီစာအုပ်ဟာ အကြောင်းပြချက် တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်တာရယ်... နဲ့ အထူးသဖြင့် အပြာဝါသနာရှင်အတော်များများ ပီဒီအက်ဖ်ဖိုင်အသီးသီး ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီးကုန်တာရယ်... ကို ထောက်ဆကြည့်တော့ ပြည်ထဲရေးက ဒီစာအုပ်ကို ပိတ်ဖို့၊ သိမ်းဖို့၊ ထိန်းဖို့ လုပ်တာဟာ သင့်တင့်မျှတတဲ့ ကိစ္စလို့ ယူဆရမှာ ဖြစ်ပါတယ်...။ Read more »
Ma Nandar April 5, 2014 at 9:06am
(၂)ပါတ်ကျော်ကျော်လောက်တုန်းက ဆိုပါတော့။ အတိအကျပြောရရင်တော့ (၂၀၁၄.မတ်လ.၁၉)နေ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နာမည်ကြီး သတင်းစာတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့ အဆာဟိ
( ASAHI) သတင်းစာရဲ့ မျက်နှာဖုံးနေရာ အလယ်တည့်တည့်လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံက ပုဂံဘုရားပုံတော်ကြီးတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
ဒိတ်ကနဲ နေသွားတယ်။ စိတ်ထဲမလည်း ဘုရား ဘုရား ပုဂံဘုရားတွေကို ဘာလုပ်ဦးမလို့ပါလိမ့်၊ ရောင်းစားတော့မှာ လား၊ ပေါင်စားတော့မှာလား၊ လဲစားတော့မှာလား၊ ငှားစားတော့မှာလား၊ ပြစားတော့မှာလား...စသဖြင့် ကိုယ့်လူများအကြောင်း ကိုယ်အသိဆုံးပါ ဆိုသလိုပဲပေါ့။
မြန်မာတို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ ဗုဒ္ဓအမွေအနှစ် လည်းဖြစ်၊ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်လည်း ဖြစ်တဲ့ ဒီပုဂံမြေနဲ့ ပုဂံဘုရားတွေကိုဘာများ လုပ်ကြဦးမလို့လဲ၊ ဘာများ ဖြစ်ပြီလဲပေါ့။
တရုတ်-မြန်မာ နယ်နမိတ်တိုင်းတာရာတွင် တရုတ်ဘက်သို့ မြန်မာရွာနှစ်ရွာ ပါသွားခြင်းကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်သို့ တင်ပြ
အီရတ်စစ်သွေးကြွတွေကို ဆီးရီးယား ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်
ရိုမန်ဘော့တွေရဲ့ ကမ္ဘာကို ဗီဒီယိုရိုက်ရန်ကမ်းလှမ်း
လကမ္ဘာပေါ်သွားမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သူ ဦးစိုးထွန်းရှိန်ပိုင် ကုမ္ပဏီနှင့် ဒေသခံများ အကြား မြေသြဇာစက်ရုံ မြေနေရာ အငြင်းပွားမှု ဖြစ်ပွား
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး ဘုရားသုံးဆူမြို့တွင် လက်မှတ် ၁၀၀၀နီးပါး NLD ကောက်ခံရရှိ
အင်န်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအဆင့်၌ လူငယ်များကို နေရာပေးရန် ပြင်ဆင်
ကြောက်စရာဇာတ်ကားတွေအတွက် ပစ္စည်းထုတ်ပေးတဲ့ဆိုင် (ရုပ်/သံ) အမေဂျမ်းနတ်ပွဲတွင် ကွန်ဒုံးနှစ်သောင်းဝန်းကျင် အခမဲ့ဝေ
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မြန်မာအလုပ်သမားကို သတ်ပြီး တက္ကစီကားထဲ ထည့်ထား
ခရီးသည်အမျိုးသား(၂)ဦးမှ အငှားယာဉ်မောင်း၏ ငွေများကို လုယက်မှုဖြစ်
MH370 လေယာဉ်ကို ရှာဖွေမည့် ဇုန်နေရာအသစ် သတ်မှတ်ကြေညာ
"တွေးတွေးပြီးတော့ တဝဲလည်လည်၊ မျှော်လင့်ချက်ရည်ရွယ်ချက်တွေ ကင်းမဲ့ယွင်းခဲ့လေတယ်။ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အတွေးဗိမာန် ကြီး တည်ဆောက်ကာရယ်။ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက် မှတ်ချက်တွေရေးကာ ဆိုဖူးခဲ့တဲ့တေးသံဝယ် ရေပြင်ကိုကြည့်ကာကြည်ကာ ကြည်နူးမှုရဲ့အရိပ်ဝယ် နှစ်သက်စရာစကားတွေနဲ့ ဖောင်ဖွဲ့ကာပဲ ကမ်းခြေဇေယျာဦးဝယ် မှန်းခြွေမေလာမှူးမယ် လွမ်းနေ၊နေပါဘူးကွယ် ကမ်းခြေဇေယျာဦးဝယ်"
ကိုယ့်လည်ပင်းကို ဓားဖြင့်လှီး၍ သေကြောင်းကြံစည်
ဦးလေးဖြစ်သူက အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင့်
မြန်မာပြည်မှာ မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ် သုံးနိုင်တော့မည်ဟု ဗဟိုဘဏ်ပြောကြား
ရန်ကုန်ရှိ မြို့နယ်အချို့ ရေကြီး၊ စာသင်ခန်းများပင် ပိတ်ထားရ
ဦးဆန်းဆင့် ငွေအလွဲသုံးမှု ရှိမရှိ လွှတ်တော်စိစစ်မည်
မန်ဝင်း ဒေသအတွင်း အစိုးရတပ် နှင့် KIA တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဖြစ်ပွား
ခေါင်းတလုံး နှင့် ကိုယ် ၂ ခုပါ လပိုင်း ကလေး ၅ နာရီ ကျော်ကြာ အောင်မြင်စွာ ခွဲစိတ်နိုင်
တရုတ်ဝမ်ပေါင်ကုမ္ပဏီအား မြန်မာ၊ တရုတ်၊ အမေရိကန် ဥပဒေပညာရှင်များ ပူးပေါင်းစစ်ဆေးမည် ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် အဆောက်အဦး အ၀င်လမ်းမများ သံဆူးကြိုးဖြင့် ကာရံပိတ်လိုက်ပြီ
ဗိုလ်ချုပ်မောင်မောင်အုန်းကို ရခိုင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်အဖြစ် ခန့်အပ်ရန် သမ္မတ သ၀ဏ်လွှာပို့
ပါကစ္စတန်ရှိ ပက်ရှဝါလေဆိပ် တိုက်ခိုက်ခံရ ၁ ဦးသေ၊ ၃ ဦး ဒဏ်ရာရ
ဝန်ကြီး ဦးသာအေး ကို ဆန္ဒပြကြ
Kyar Phyu Nwe shared Yangon Media Group's photo.
နှစ်စဉ် ငွေကျပ်တစ်သိန်းကျော်ကို မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်မှတစ်ဆင့် ပြည် တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန သို့ ပေးဆောင်ရသည်ကို သူ မှတ်မိနေသည်။ အမြတ်ခွန်လား၊ ဝင်ငွေခွန်လားဆိုတာတော့ သူ နားမလည်ကြောင်း လှိုင်မြို့နယ် စံပယ်ခြံ ၂လမ်းတွင်နေထိုင်သော အသက် ၈ဝကျော်အရွယ်အငြိမ်း စားဝန်ထမ်း ဦးသန်းကဆိုသည်။
ဖူးကျော်ဇင် (Future Wave)
JOB seekers Journal Vol.2,No.52
အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ တိုးတက်ခြင်း၊ ဆုတ်ယုတ်ခြင်းတွေ အားလုံး ဟာ ခေါင်းဆောင်မှုအပေါ်မှာ အဓိကမူတည်နေတယ်လို့ ခေါင်းဆောင် မှု ဟောပြောသူ ဆရာကြီး
ဂျွန်မက်စ်ဝဲလ်က ဆိုပါတယ်။ အဖွဲ့အစည်းတိုင်း အတွက်အဓိကအရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ် ပါတယ်။
အမျိုးသမီး၊ ကလေးငယ် များ လုံခြုံရေး အတွက် မတူပီ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တောင်းဆို ဆန္ဒပြ
လိုင်စင်ရှိ နယ်ကျော်ဆိုင်ကယ်များ ဖမ်းဆီးရမိမှု အများဆုံးဖြစ်နေ ရှမ်းပြည်နယ်မှ ဦးခေါင်း ၁ လုံးသာပါရှိသည့် အမွှာကလေးငယ် ချင်းမိုင်တွင် ခွဲစိပ်
ခလရ ၃၈ တပ်က လယ်ပြန်ပေးသော်လည်း ရပ်/ကျေး လယ်/စီ အဖွဲ့က မကောင်းသည့် လယ်များတွင် နေရာချပေး
အမျိုးသမီးတစ်ဦး ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဆိုင်ကယ်စီး လုယက်ဂိုဏ်း စစ်တွေတွင် ဖမ်းမိ
မြေပုံ ပန်းရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများကို ခုံရုံးဖွဲ့ စစ်ဆေးပေးမည်ဟုဆို
ဇွန်လအတွင်း ဓာတ်လိုက်ခံရ၍ သေဆုံးသူ ၁၀ ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့ပြီး လေးဦးဒဏ်ရာရရှိ
တွင်းတောင်၌ စိမ်းပြာရေညှိနှင့် တွင်းပိုး လုံးဝ မထွက်တော့
မြန်မာနိုင်ငံမှ တင်ပို့သည့် ငါးရှဉ့်များတွင် ရောဂါပိုး တွေ့ရှိမှုကြောင့် တရုတ်ဘက်မှ အဝယ်သိသာစွာ နည်းပါးသွား
စာနယ်ဇင်းကောင်စီကို အသိအမှတ် မပြုရာရောက်၊ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့် ခြိမ်းခြောက်လာလျှင် တုံ့ပြန်မည်ဟုဆို
ရှစ်လေးလုံးဒဏ္ဍာရီ (သို့မဟုတ်) ရင်ဘတ်နောက်မှာ….ကျောပဲရှိတယ်
၈၈အရေးအခင်းတုန်းက ကျွန်တော် သုံးတန်းကျောင်းသားဘ၀။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ၈.၈.၈၈ကျမှ အုန်းအုန်းထပေမယ့် ကျွန်တော်တို့မြို့လေးမှာ ၆ရက်နေ့ကတည်းကစတယ် ပြောရမယ်။
အဲဒီနေ့ နေ့လည် ၁နာရီလောက်မှာ ခေါင်းလောင်းတီးသံကြားရတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ဆရာ/ဆရာမ အစည်းအဝေးတွေရှိရင် ကျောင်းစောဆင်းပေးတတ်တော့ ကျောင်းသားတွေရော ဆရာဆရာမတွေ ပါ ကျောင်းစောဆင်းပေးတဲ့ ခေါင်းလောင်းသံမှတ်ပြီး အလျိုလျိုထွက်လာကြတယ်။
ဗြိတိသျှစာရေးဆရာကြီး ဂျော့အော်ဝဲလဲ ၏ ကမ္ဘာ့နံပါတ်တစ် နိုင်ငံဆိုး ဝတ္ထုစာအုပ် “1984” ကို လက်ရှိ ဗမာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းနှင့် ဆီလျော်အောင် ဗမာမှုပြုထားသည့် နှစ်ထောင့်ရှစ်ဆယ့်-လေး
အခန်း(၁) - အပိုင်းတစ်
တောက်ပြီး အတော်ကလေးကို ချမ်းသော နေ့တနေ့ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တမြို့လုံးက နာရီတို့သည်
တဆယ့်သုံးချက် ထိုးနေသည်။ ကိုကျောက်ညိုသည် ဒရကြမ်းတိုက်နေသော လေစိမ်းကို ခံသာရန်
သူ့မေးစေ့ကလေးကို ရင်ဘတ်အောက် ဆွဲဝှက်ထားလိုက်ပြီး “အမျိုးသားရေးအောင်ပွဲ နန်းတော်”
၏ မှန်စီရွှေချ ပွတ်လုံးတံခါးမကြီးများ ကြားမှ လစ်ကနဲ မြန်မြန် ထွက်လာခဲ့သည်။ လေဆင်နာမောင်း
တချက်က မျက်နှာပေါ် အသဲ့ ပက်ထည့်လိုက်သော ကျောက်သလဲမှုန်ကလေး တွေကိုတော့ သူ မရှောင်နိုင်ခဲ့။
လူသွားလမ်းပေါ် သူရောက်လာသည်။ လေစိမ်းသည် လန်းလန်းဆန့်ဆန့် ရူသင်းပျံ့ ဖွယ်ရာ မဟုတ်ဘဲ
နန်းဆောင်ကြီးထဲမှ ကော်ဇောဟောင်းတို့၏ ဆွေးသိုးသိုး အနံ့နှင့် လမ်းဘေးဈေးတန်း က ဈေးသည်တို့၏
မလတ်တလတ် ဂေါ်ဘီစိမ်းနံ့တို့ လာရောယှက်လို့ နေသည်။
ဝေဖန်မှုများ ကြုံနေသော ရိုမန်းဘော့ထ်တွေရဲ့ကမ္ဘာစာအုပ် ပစ္စည်းပြတ်သည်အထိ ရောင်းကောင်းနေဟုဆို
လေလံတံဆိပ် အတုများဖြင့် လိုင်စင်မဲ့ကား ၇ စီး ရောင်းချထားမှု သျှမ်း(မြောက်) မှ ခေါင်းတလုံးပါအမွှာ ချင်းမိုင်၌ ခွဲစိတ်မည်
အမိန့်ချရန် တောင်းဆိုသည့် ကိုထင်ကျော်ကို အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ခြောက်လချ
လိင်အသားပေး စာအုပ်ဟု ဝေဖန်မှုများ ထွက်ပေါ်နေသော စာအုပ်အား ပြန်လည် သိမ်းဆည်းခိုင်း
လိုင်စင်မဲ့ နှင့် လိုင်စင်အတု များ၏ လက်ထဲမှ လူ့အသက် စစ်စစ်များ
အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များနှင့် သိသည်ဟုဆိုကာ ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်သည့်ရိုးရာ မပျက်သေး
၁၉၈၂ ဥပဒေအရ နိုင်ငံသားဖြစ်ရေး အစိစစ်ခံသူ ၁၆ ရာခိုင်နှုန်းသာရှိ
သတင်းမီဒီယာသမားများကို သတင်းတပ်ဖွဲ့က ခေါ်ယူမေးမြန်းမှု စစ်အစိုးရလက်ထက်ကဲ့သို့ ဖြစ်နေ
ဦးအံ့မောင် ကို စစ်ဆေးနေပြီ ဆို
7Day News Journal's photo.
နေအိမ်ရှိ တစ်လုံးတည်းသော အော်တိုတယ်လီဖုန်းမြည်လာချိန်တွင် ဦးနေမင်းတစ်ယောက် အလွန် သတိဝီရိယကြီးစွာဖြင့်
ဖုန်းကိုင်လိုက်သည်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ၊ ဒါကာမြို့တွင် အခြေစိုက်သည့် သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သတင်းထောက်ဟု ထင်လိုက်သော်လည်း တစ်ဖက်မှ ‘‘BBC သတင်းထောက် လား’’ဆိုသော အသံကြောင့် တအံ့တသြဖြစ်သွားချိန်တွင် Read more »
Htun Aung Gyaw June 21, 2014 at 10:14am
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်တက်လာသော ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ လက်ထက်တွင် မထင်မှတ်သော အပြောင်းအလဲများ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အထူးခြားဆုံး အပြောင်းအလဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ချုပ်ကိုင်ထားသည့် သတင်းမီဒီယာကို လွတ်လပ်ခွင့်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာဆီယံတွင်း တိုးတက်သော နိုင်ငံများဖြစ်သည့် စင်္ကာပူ၊ မလေးရှား၊ တရုတ်နိုင်ငံတို့ထက် မြန်မာနိုင်ငံက
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် ပိုမိုရှိသည်ဟု ပြောဆို လာခဲ့ကြသည်။ သာဓကအားဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံတွင် Facebook သုံးစွဲခွင့်ကို တားမြစ်ထားသည်။ ထို့အပြင် စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်၊ ဆန္ဒပြခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်တို့ကို ပေးလာသည့်အတွက် လွတ်လပ်မှု အရသာကို ပြည်သူတို့ ခံစားလာရသည်။ ယခင် စစ်အစိုးရအဆက်ဆက် ဖိနှိပ်ထားမှု၊ မတရားသော်လည်း ပြန်လည်တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါက ပါးစပ်ဥပဒေဖြင့် မတရားလုပ်သူများက အမှုနိုင်ပြီး မတရားခံရသူများက တရားခံ ဖြစ်နေသောခေတ်တွင် ထောင်တန်းကျမည်ကို ကြောက်ရ၊
လေပြင်းတိုက်၍ ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကျောက်တန်း အထကကျောင်း ဆောင်များပျက်စီး
လူကြီး၊ လူငယ်ကြား အမြင်ကွာခြားချက်များနှင့် မြန်မာ e-Sports
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် တရုတ်ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းအချို့နှင့် ရွာသားများ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်
သံဃာ ၂ ပါး အရက်မူးပြီး စကားများ ရန်ဖြစ်ရာမှ တုတ်ဖြင့်ရိုက်၍ သေဆုံး
ပြည်သူရွေးချယ်ထားခြင်း မဟုတ်သော ကိုယ်စားလှယ်များ မဲပေးခွင့်မရှိသင့်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
တရုတ်ရိုးရာ ခွေးသားစားပွဲတော်ကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်
အိမ်သာသွားတဲ့ အဆောင်နေ ကျောင်းသူကို ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ချွန်ထက်သော အရာနှင့်ထိုး
အီရတ် ဆွန်နီသူပုန်တွေ မြို့တွေထပ်မံသိမ်း
သက်သာပန်းတောင်းရွှေရင်အေးစေတီတော် အ၀င်လမ်းပိတ်ပြီး ခြံစည်းရိုးခတ်ထားမှု ဒေသခံများ ဖယ်ရှား
ကမ္ဘာ့ဖလား အာဂျင်တီးနား ဒုတိယအဆင့်တက်၊ ကလိုဆေး ဂိုးအများဆုံး ပူးတွဲ စံချိန်တင်
မြေနီကုန်းအရေးအခင်း ၂၆ နှစ်ပြည့် အကသကျောင်းသားတွေ ကျင်းပ
ရန်ကုန်တွင် မီးဖိုချောင်သုံးဂက်စ် ဈေးနှုန်းထပ်တက်
တောင်ကိုရီးယားတပ်ကြပ် ပစ်ခတ်မှု ၅ ဦးသေ
ကလေးငယ်တွေ ဈေးရောင်းခိုင်းသူ မြန်မာနိုင်ငံသား ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ ဖမ်းဆီး
လူသားပြတိုက်ထဲက မြန်မာနိုင်ငံသား ကြေးကွင်းစွပ် ကယန်း ပဒေါင်များ The Irrawaddy (Burmese Version)'s status update.
ဘတ် ၅၀၀ မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ဆိုရင် ၁၅၀၀၀ ဝန်းကျင်ပေးပြီး ကြည့်ရတဲ့ လည်ပင်းကြေးကွင်းစွပ် ကယန်း ပဒေါင် တိုင်းရင်းသားတွေဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးက မြန်မာနိုင်ငံ ကယားပြည်နယ်က လာကြတာပါ။
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း ချင်းမိုင်ခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ မဲ့ဆာ (Mae Sa) မြို့ငယ်လေးက ထိုင်းသူဌေး တစ်ဦးပိုင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်ဝန်း ကျင်က ဖွင့်ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Read more »
လှည်းတန်းဈေးအနီး ဓာတ်ကြိုးပြတ်ကျရာ နှစ်ဦးသေ၊ နှစ်ဦးဒဏ်ရာရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရေတာရှည်မြို့ဟောပြောပွဲ (အသံဖိုင်)
စစ်တွေရဲစခန်းမှ အပြစ်မဲ့ လူငယ်တဦးအား မတရား ညှင်းပန်း ချုပ်နှောင်မှု ရေဇွာ (ဇိုတုန်) အမျိုးသမီးများမှ အမျိုးသမီး ဘ၀လုံခြုံရေး အတွက် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ကျင်းပမည်
မျိုးစောင့်ဥပဒေ အကောင်အထည်မဖေါ်ဖို့ကုလလူ့ခွင့်အရေး ကျွမ်းကျင်သူတွေ တောင်းဆို
အိန်ဂျလီနာဂျိုလီ မယ်ဟောင်ဆောင် ဒုက္ခသည်စခန်းကို သွားရောက်ခဲ့
ဂါနာအသင်းက ဂျာမဏီကုို နုိုင်လိမ့်မည်ဟု ရေဘ၀ဲ ရဂျီးနား ခန့်မှန်း
ရခိုင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန် နယ်လုံဝန်ကြီး ယာယီယူ
မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် PR ရှေ့ခရီး
"ဖလ်နေ၀န်းသို့ညီ ထွန်းလင်းပြောင်ပေသည်။ ဒါတို့တိုင်းတို့ပြည် တို့ကာကွယ်မည်။ထူးမြတ်တဲ့ တို့တိုင်းပြည် တိုင်းရင်းသား ငါတို့ လူမျိုး ပိုင်ရမည်လွတ်လပ်တဲ့ တို့တိုင်းပြည် ငါတို့ရဲ့ ခြင်္သေ့စိတ်ထား တည်ရမည်အာဇာနည် ရဲမက်တွေသည် ဇွဲနဲ့ တိုက်မည်။ ဗမာတွေ နိုးကြား လာပြီ ၊ အမျိုးသားစစ်သည်သေပေစေ၊ ရဲတဲ့ဇာနည် ဇွဲနဲ့တိုက်မည်၊ ခိုက်မည်တပ်မတော်ကြီးလည်း ချီလာပါပြီ၊အောင်တပ်မတော်ကြီးလည်း ချီလာပါပြီ"
မြန်မာလူမျိုး တော်တော်များများ `` မြင်းထိန်းငတာ´´ ဆိုရင် သိကြပါတယ်။
ဘယ်လိုသိသလဲဆိုတော့ မြင်းထိန်းငတာက နန်းတွင်း ပညာရှိ ယောအတွင်းဝန် ဦးဘိုးလှိုင် ရဲ့ ``ဥတုဘောဇန သင်္ဂဟကျမ်း နဲ့ ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟ ကျမ်း´´ တွေကို ချီးမွမ်းဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတွက် ကိုယ်တိုင်ရေးသားခဲ့သူ အတွင်းဝန် ဦးဘိုးလှိုင် ကိုယ်တိုင် အဝတ် ပုဆိုးပေးပြီး နောင်မပြောလေနဲ့လို့ တားမြစ်ရတယ်ဆိုပြီး သိခဲ့ကြတာပါ။